HomeAfaan OromooQaamoleen sadii Oromiyaa keessatti hiriira waamaa jiru jedha Addisuu Araggaa
Tibba kana Oromiyaa keessa hiriirri mootummaa mormu akka gaggeefamu waamicha dhiyaachaa jira jedhamurratti ibsa kan kennan Sadarkaa Pireezidantii Itti aanaatti qindeessaan dhimmoota Hawaasummaa obbo Addisuu Araggaa, ”yeroo kanatti hiriira mormii waamuun nama du’atti waamuu wajjiin qixxeedha” jedhe. [Yeroo kanatti ummata Oromoo Dhiya Oromiyaatti, Kibba Oromiyaatti, Baha Oromiyaatti, Giddu Gala Oromiyaa fi bakkoota birootti badii tokko malee waraanaa fi tika mootummaa Itophiyaatiin haala suukkanessaa ta’een akka bineensaatti ajjeefamaa jiran du’a dhukkuba Koronaatiin dhaqqabe kan baayyee caalu ta’uu isaa garuu waan ibsan hin jiru. Kanaaf, Oromoo mana taa’eeyyuu jumulaan waraana mootummaatiin dhumaa jiruuf maaliif du’a dhukkuba Koronaatiin ga’uu danda’u caalchisee akka Obbo Addisuun sodaateef ifa miti!]
Uummatni kanneen hiriira mormii waamaa jiru akka hin fudhanne dhaamanii, “kanneen faallaa dantaa biyyaa dhaabatanirraa of eeguu qabaa” jedhe.
Gareen hiriira mormii kana waamaa jiran uummata fayyadamanii fedha aangoo qabachuu isaanii milkeessuuf kanneen socho’aniidhas jedhe jira.
Qaamota hiriira kana duuba jiruu ittiin jedhen sadii akka ta’aniis obbo Addisuu himee jira.
Gareewwan sadeen keessaa:
Masriin kan deeggaramuufi fayidaa Itoophiyaan hidha guddicharraa argattu dhabsiisuu warra barbaadanii jedha.
Obbo Aaaddisuun garee lammaffaa ‘Wayyaanee’ jechuun kan ibsen yoo ta’u gareen kun “asiin dura uummata Itoophiyaa gidirsaa kan tureedha” jedha.Gareen “kun faayidaa barate waan dhabeef ‘mootummaa aangoorra jiru laaffisuuf gama adda addaatiin socho’aa akka jiru ibsa.
“Gareen sadaffaan immoo paartii siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti socho’an filannoon achi siiquutti fayyadamuun aangoo karaa seeraan alaatiin qaamota argachuuf fedhii qabaniidha,” jedhe jira.
Hawaasnis hariirri mormii kun qaamoleen sadan kunneen wal gahanii kan karoorfatan ta’uu beekee of eeggannoo akka taasisuuf waamicha dhiheessaniiru.
“Hawaasnii naannichaa gaffii bu’uraa yoo qabaate karaa sirriin haa dhiyeessu” kan jedhe Obbo Addisuun, kanaan achi dhimoota jiran irratti mootummaan seeraa kabachiisuuf ‘daandeettis, humnas’ qaba jedhe jira.